Ireo mpanamboatra sy mpamatsy efitrano fidiovana | IVEN
Tetikasa efitrano madio
Ny rafitra efitrano fidiovana lVEN dia manome serivisy fandefasana dingana feno mandrakotra ny endrika, famokarana, fametrahana ary ny fanirahana amin'ny tetikasa fanadiovan-drivotra fanadiovana mifanaraka amin'ny fenitra mifandraika sy ny rafitra kalitao iraisam-pirenena ISO / GMP. Nanangana fananganana, fiantohana kalitao, biby fanandramana ary departemanta famokarana sy fikarohana hafa izahay. Noho izany, azontsika atao ny mahafeno ny fanamasinana, ny fivoaran'ny rivotra, ny fanamorana, ny jiro, ny filan'ny herinaratra ary ny haingon-trano amin'ny sehatra maro samihafa toy ny aérospace, electronics, pharmacy, fikarakarana ara-pahasalamana, biotechnology, sakafo ara-pahasalamana sy cosmetika
Ho an'ny atrikasa famokarana indostrialy, biolojika, fitsaboana, indostria elektrika.
Votoatin'ny rafitra efitrano madio
Ny firafitry ny efitrano sy ny haingon-trano
Ny rafitra rindrina fisarahana loaka midina dia taranaka vaovao vahaolana amin'ny rindrina fanadiovana novolavolain'ny fanadiovana antsika. Ny firafitra poakaty tsy manam-paharoa sy ny fomba fampifangaroana modular mitarika mitarika eo amin'ny sehatry ny asa dia ampiasaina amin'ny sehatra biomedika, elektronika ary sehatra hafa.
Rafitra fanamafisam-peo manadio rivotra
Ny rafitra rivotra madio IVEN dia mampiasa fitaovana avo lenta, ary sensor, valves ary fantsom-piaramanidina marika Siemens ambony indrindra miaraka amin'ny HUAMEI Brand rubber miaraka amin'ny foil aluminium mba hahazoana antoka fa misy insulation matanjaka sy famehezana. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa fametrahana IVEN dia manana traikefa fametrahana tetikasa mihoatra ny 15 taona, mitahiry fahaiza-manao fametrahana tonga lafatra foana.
Fitaovana fanamafisam-peo (AHU)
Mba hampifandanjana ny angovo famonjena sy ny fahombiazana avo lenta, IVEN dia mikarakara be loatra amin'ny famolavolana rafitry ny toetr'andro ho an'ny mpanjifa. Misafidy McQuay, TICA AHU, TRANE Chiller, sns izahay araka ny fitakian'ny mpanjifa.
1.Ny fantsom-panafody indostrialy
2. fantsona rano mangatsiaka
3. fantson-drano mangatsiaka
4. fantsona efitrano fandroana rivotra
5. fantson-drano rano fanonerana
Rafitra elektrika sy jiro
Fitaovana tetikasa efitrano fidiovana IVEN miaraka amin'ny jiro karazana madio namboarina sy switch Siemens mifandraika amin'izany, tariby elektrika Schneider.
Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy AC
1.PVC gorodona: France Gerflor, LG
2.Epoxy gorodona: 4mm Self-leveling Epoxy gorodona
Tombony ho an'ny efitrano madio IVEN
1.Mampiasà tontonana sandwich tena tsara kalitao miaraka amin'ny akora BAO Steel.
2.We dia afaka mamolavola sy manatanteraka ny tetikasa efitrano madio
3.IVEN dia mampiasa ampahany lehibe amin'ny marika TOP indrindra, toy ny Siemens, Schneider, Camfil, McQual, TRAIN sns.
4.Mihoatra ny 15 taona dia misy tetik'asa 25 ahitana ny traikefan'ny tetikasa USA USA ary ny fahaiza-manao amin'ny fametrahana.
Ekipa fametrahana sy fananganana tetikasa
Previous: Tsipika famokarana syringe
Manaraka: Rafitra fitsaboana RO Water pharmaceutika
Fonosana ambaratonga faharoa amin'ny fanafody fanafody fanafody ...